चुनाव जितेका आइडल र उनीहरुको भविष्य - MusicKhabar.com: Nepal's No. 1 Musical Newspaper
चुनाव जितेका आइडल र उनीहरुको भविष्य
इन्डियन आइडल भएपछि केही समय त प्रशान्त तामाङको चमकधमक निक्कै लोभलाग्दै थियो । उनी देश–विदेशका कार्यक्रमहरुमा पनि व्यस्त नै थिए । जता गए पनि फ्यानहरुले उनलाई घेरा हाल्थे । चलचित्रमा समेत उनको डिमाण्ड राम्रो थियो । तर त्यो क्रेज लामो समय टिक्न सकेन । यतिबेला उनी गुमनाम छन् । अझ स्पष्ट भाषामा भन्नुपर्दा लापरवाहीका कारण इण्डियन आइडलको उपाधीले उनको छँदाखाँदाको जागिर समेत चट् भयो । नेपाल आईडल वुद्ध लामा विजेता भएको एकवर्ष पनि नहुँदै अज्ञात भईसके । यो बीचमा उनका यादगार गीत पनि आएनन् ।
नृत्य, गायन र अभिनयको क्षेत्रमा आयोजित पुराना केही ’रियालिटी शो’ ले निरन्तरता नपाए पनि पछिल्ला केही समय यता नेपालमा पनि फरक फरक विधामा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका र ठूलो राशी पुरस्कार भएका ’रियालिटी शो’ हरुको आयोजना हुन थालेका छन्, जुन खुशीको कुरा हो । भर्खरै मात्र रु. ५० लाख प्रथम पुरस्कार भएको लोक गायन प्रतियोगिता ’नेपाल लोक स्टार’ को घोषणा भएको छ भने अन्तर्राष्ट्रिय ब्राण्डका दुई कार्यक्रम ’नेपाल आइडल’ र ’भ्वाइस अफ नेपाल’ भर्खरै मात्र सम्पन्न भएका छन् ।
’रियालिटी शो’हरुले क्षमता भएर पनि ओझेलमा परेका प्रतिभाहरुलाई बाहिर ल्याउने काम गर्दछ, यसमा दुई मत नै छैन । तर प्रतिस्पर्धा जबजब निर्णायक विन्दुमा पुग्दै जान्छ, तबतब जजहरु निरीह बन्दै जाने र जनताको भोट नै सर्वोपरी हुने जुन परम्परा छ त्यसले सही अर्थमा प्रतिभाको छनोट गर्छ त ? प्रश्न यहाँनेर छ । ’रियालिटी शो’ हरुमा भोटिङ परम्परा विश्वव्यापी अभ्यास हो, जसबाट नेपाल पनि टाढा रहन सक्दैन । किनकि यो परम्परा आयोजकको अर्थोपार्जनसँग जोडिएको छ ।
एउटा सामान्य श्रोताले सही मूल्याङ्कन गर्छ र योग्य कलाकारलाई भोट दिन्छ भन्ने ठान्नु नै ’बकबास’ हो । जुन कुरा आयोजकलाई पनि थाहा हुन्छ । जनताबाट उपयुक्त पात्र छानिन्छन् भन्ने अपेक्षा सायद कुनैपनि आयोजकले गरेका हुँदैनन् । कति एसएमएस आयो र त्यसबाट कति रकम जम्मा भयो भन्ने हिसाबकिताबमा आयोजकको ध्यान केन्द्रित हुने गर्दछ ।
नेपाल बाहिर आयोजना हुने यस्ता प्रतियोगिताहरुमा ’नेपाली’ को नाताले भोट गर्ने गरिएको छ भने नेपालभित्रका कार्यक्रममा जातीय र भेगीय नाताको आधारमा कलाकारले ’सपोर्ट’ पाउने गरेका छन् । जुन भेदभावको मानसिकता डरलाग्दो किसिमले बढिरहेको छ । जसले गर्दा ’राम्रोले हैन हाम्रोले’ प्राथमिकता पाउँदै आएका छन् । भरखरै ’नेपाल आईडल’ को विजेता बनेका रवि ओडको जीतलाई पनि कसै कसैले उनको गरिबीसँग जोडेर आफ्ना मतहरु राखेका छन् भने प्रथम ’नेपाल आइडल’ वुद्ध लामाको जीतलाई धेरैले जातीय उपलब्धीका रुपमा व्याख्या गरेका थिए ।
क्षमता र योग्यता भन्दा ठूलो उपाधि या पद उसैका लागि पनि घातक हुन सक्छ । काखी च्यापेर मैदानमा ल्याएईएको खेलाडीले गोल गर्छ भन्ने सोच्नु भ्रम मात्र हो । सफल कलाकार हुन त मान्छेको दिल जित्नुपर्छ, मन मनमा बस्न सक्नुपर्छ । फगत भोटले दिलाएको जीत केही क्षणको लागि त न्यानो होला तर कालान्तरमा त्यसले भविष्य चिसो पार्न सक्छ । त्यसैले ’रियालिटी शो’ हरुमा भोट दिंदा आम जनताले पनि योग्यको समर्थन गर्ने बानी बसाल्न जरुरी छ । यदि क्षमता, लगनशीलता, लक्ष र इमान्दारिता छ भने सफलता हासिल गर्नका लागि कुनै प्रतियोगिताको ’टाइटल’ जित्न जरुरी नै छैन । हाम्रो क्षेत्रमा त्यस्ता धेरै कलाकारहरु छन् जो कुनै ’रियालिटी शो’ को ’टाइटल विजेता’ नभएर पनि राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा सबैका प्रिय छन् ।